अप्रिलमा ओसाका मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
जापान मा यो अप्रिल देखि मे को वसन्त पर्यटन मौसम हो। किनभने त्यहाँ धेरै न्यानो र आरामदायक दिनहरू छन्, पर्यटन स्थलहरू देश र विदेशका मानिसहरूसँगै थिए। ओसाका अप्रिलदेखि शिखर पर्यटन मौसम पनि अनुभव गर्दैछ। यदि तपाइँ अप्रिलमा ओसाकामा बस्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, तपाइँ कस्तो किसिमको कपडा तयार पार्नुपर्दछ? यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई एक विचार दिन अप्रिलमा ओसाकाको मौसमको बारेमा छलफल गर्नेछु।
तल अप्रिलमा टोकियो र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ।
ओसाकामा अप्रिलमा मौसम (अवलोकन)
अप्रिल (२०१ 2018) को सुरूमा ओसाका मौसम
अप्रिल (२०१ 2018) को बीचमा ओसाका मौसम
अप्रिलको अन्तमा ओसाका मौसम (२०१))
ग्राफ: अप्रिलमा ओसाकामा तापमान परिवर्तन
ओसाकाको जलवायु होन्शुका अन्य प्रमुख शहरहरू जस्तै टोकियो जत्तिकै उस्तै हो। अप्रिलमा, २० डिग्री उच्च तापमान भन्दा बढी दिन प्रचुर मात्रामा हुन्छन्। मौसम सामान्यतया राम्रो छ त्यसैले तपाईं आरामदायक ठाउँहरू वरिपरि घुम्न सक्नुहुन्छ।
यो तातो छ, त्यसैले तपाईलाई सायद जम्परहरू र त्यस्ता दिनको आवश्यक पर्दैन। जबकि, साँझमा तापमान दिउँसो तापमान भन्दा १० डिग्री भन्दा कम कम हुनेछ। यदि तपाईं रातो बाहिर चेरि फूलहरू हेर्नको लागि हुनुहुन्छ भने, मलाई लाग्छ कि जम्पर ल्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ।
अप्रिलको अन्त्यमा, सूर्यको किरण अझ बलियो हुन्छ। घमाइलो दिनमा, तपाइँलाई दिन समयमा कार्डिगन वा यस्तै कपडाका सामानहरू आवाश्यक पर्दैन। जे होस्, दिमागमा राखौं कि यो राती चिसो हुनेछ।
अधिकतम तापमान (सेल्सियस) 24.9
न्यूनतम वायु तापमान 6.1
कुल वर्षा 15.0 मिमी
राम्रो मौसम अनुपात 59%
अप्रिल,, २०१ 8: ओसाका जापानको ओसाकामा महल। महल जापानको सबैभन्दा प्रसिद्ध स्थलहरू मध्ये एक हो = शटरस्टक
अप्रिलको सुरुमा ओसाकाको विभिन्न भागहरूमा चेरी फूलहरू फूल्नेछन्। दिनहरू तातो हुन जारी रहन्छ तर कहिलेकाहीं चिसो जाडो जस्तो दिन फर्किन्छ। यो कहिले काँही वर्षा हुन्छ, त्यसैले छाता तयार गर्नुहोस्।
यदि तपाईं राति चेरी फूलहरू हेर्नको लागि योजना गर्नुहुन्छ भने, ज्याकेट ल्याउनुहोस् किनकि कहिलेकाँही तापमान १० डिग्रीभन्दा तल झर्दछ।
अप्रिलको शुरुमा, ओसाकामा सूर्योदय समय 5::41१ वरपर हुन्छ र सूर्यास्त समय १ 18:२२ वरिपरि हुन्छ।
अधिकतम तापमान (सेल्सियस) 25.9
न्यूनतम वायु तापमान 9.6
कुल वर्षा 69.0 मिमी
अप्रिल ११, २०१:: ओसाका कासल र चेरी फूल बाहिर नहरको किनारमा आइमाई ओसाका कासल, ओसाका, जापानमा धेरै खिल्यो
अप्रिलको मध्यमा, ओसाकामा, चेरी फूलहरू अलिकति तितरबित हुनेछ तर अप्रिल १० देखि १ 10 सम्म तपाईंले उनीहरूलाई देख्न सक्नुहुनेछ।
त्यस पछि रूखहरू ताजा र सुन्दर हरियो रंगमा परिवर्तन हुनेछ।
यस समयमा, दिनको अधिकतम तापमान २ degrees डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन सक्छ। जे होस्, यो बिहानी र बेलुका अझै पनि चिसो छ, त्यसैले कार्डिगन वा अधिक ल्याउनुहोस्। तपाईंले कहिलेकाँही वर्षाको अपेक्षा गर्नुपर्दछ।
मध्य अप्रिलमा, ओसाकामा सूर्योदय समय करीव :5:२:27 र सूर्यास्त समय करिब १ 18: .० हुन्छ।
न्यूनतम वायु तापमान 12.8
कुल वर्षा 56.0 मिमी
राम्रो मौसम अनुपात 60%
अप्रिल २,, २०१:: ओसाका, जापानको युनिभर्सल स्टुडियो थीम पार्क बाहिर पर्यटक र युनिभर्सल ग्लोब = शटरस्टक
अप्रिलको अन्तमा, तापमान धेरै तातो छैन र धेरै चिसो पनि छैन। यो धेरै सहज हुनेछ र कम वर्षा हुनेछ। ओसाकामा, यो यात्रा गर्नका लागि एक उत्तम मौसम हो। यद्यपि अन्य पर्यटकहरू पनि यस समयमा फाइदा लिने र लोकप्रिय पर्यटन स्थलहरूको भीडमा हुने अपेक्षा गर्नुहोस्।
जापानमा, अप्रिल २ th देखि मे 29th सम्म वरिपरि, "गोल्डेन सप्ताह" ले धेरै बिदाको विशेषता सुरु गर्दछ। यस अवधिमा, पर्यटन स्थलहरु धेरै भीड छन्। होटल र विमानहरू पनि यसको परिणाम स्वरूप महँगो छन्।
अप्रिलको अन्तमा, ओसाकामा सूर्योदय समय करीव :5:१:15 र सूर्यास्त समय १ 18::38 हुन्छ।